Igbo sị na ọ na-abụ onye e nyèrè mara chukwaa, ọzọ pụta, e chèta ya. Ọ bụ n'ịgbasò nke a ka gọọmenti steeti Anambra jiri zụta ma bunye ndị ụlọ ahụ na-ahụ maka mkpocha na nzàcha nakwa ọnọdụ adịmọcha n'ime steeti ahụ, bụ ụlọ ọrụ a maara dịka 'Anambra State Waste Management Agency, (ASWAMA)' ụgbọala ọhụrụ na akụrụngwa e ji arụ ọrụ, dị isii n'ọnụ ọgụgụ, iji kwàlitekwuo ma nyere ha aka n'ọrụ ha.
Obianọ Agbapeela Àkwà Ngafè MCC Ọnịtsha Ka E Dozichàrà Ya
Aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ agbapeela àkwà ngafè okporo ụzọ ahụ dị na mpaghara MCC Ọnịtsha, ka ndị mmadụ malitekwa ịga na ya, dịka gọọmenti dozichàra ya ma mee ka ọ kwụrụ chịm ọzọ.
Ụlọ Omeiwu Ajụla Amụma Ịmachi Ibubata Igwe Na-enye Ọkụ Latiriki
Ụlọ Omeiwu Naijiria ajụla ịmachi ibubata ìgwè na-enye ọkụ dịka ụzọ isi kwalite ọnọdụ ọkụ n'ala anyị. Aro a sitere n'aka Sinatọ Francis Fadahunsi ka amachie ịtụbata ìgwè na-enye ọkụ latiriki maka afọ ise iji were wulite ọnụdụ ọkụ latiriki n'ala anyị ma gbapụ ya ọsọ ịhụ na-ewetara ụsa nye ọtụtụ nsogbu na ihe iche aka mgba dịrị ya.
Dịka mba ụwa merùbèrè mmemme ụbọchị ịga mposi nke ahọ 2019, a kpọkuola ma dụọ ụmụafọ steeti Anambra ka ha zèere ịga mposi aghara aghara, ọ kachasị n'ebe ezighị ezi na steeti ahụ.
Bello Enwetala Mmeri na Ntụliaka Gọvanọ Kogi
N'ụtụtụ ụbọchị Mọndee, ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka INEC, kpọpụtara Bello dịka onye turu ugo na ntụliaka gọvanọ emere ụbọchị Satọdee na Steeti Kogi. Anyị ga-amata na-akwụsịrị ịkpọpụta mpụtara ntụliaka ụbọchị ụka dịka mpụtara ntụliaka ahụ sitere okpuru ọchịchị ime obodo iri na iteghete n'ime iri abụọ na otu dị na steeti ahụ.